အရင်ဦးဆုံးနေရောင်ခြည်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် အရည်ပြားဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရင် vitamin D3 ကို ထုပ်အောင်လှုံ့ဆော်လိုက်ပါတယ်။ vitaminD3ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စားသမျှထဲက calcium လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးတွေသန်မာဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ ဓာတ်ကိုအူတွေကနေများများစုပ်ယူနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာပါခန္ဓာကိုယ် သန်မာထွားကျိုင်းပြီး ရောဂါကင်းဝေးအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ တစ်ချို့ကအသားမဲမှာအရမ်းကြောက်ပါတယ် အသားမဲမှာ စိုးလို့နေပူရှောင်တာ များသွားရင်vitaminD3တွေနဲပါးကုန်မှာပါ ။ Vitamin D3 နဲမှာကြောက်လို့ဆိုပြီး နေပူအရမ်းခံရင်လည်း နေလောင်တာ ၊ အသားနီးမြန်းတာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
*လူ့အရေပြားဟာ နေရောင်ခြည်ကို ထိတွေ့လိုက်လို့ ကြာသွားပြီဆိုရင် နီရဲလာပါလိမ့်မယ် နောက်နာရီအနည်းငယ်ကြာရင်တော့ညိုလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုညိုလာရတာဟာ အရည်ပြားအပေါ်ယံမှာရှိတဲ့ cells လေးတွေက melanin (မယ်လနင်) လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ခြယ်လေးတွေ ကို နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်နိုင်အောင် ထုပ်ပေးလို့ပါ။နေလောင်လို့နီရဲလာပြီဆိုရင် ပူစပ်စပ်နဲ့ နေရခက်ပါတယ် တစ်ချို့လူတွေဆိုချွေးမထွက်တာတွေ လူကနေရထိုင်ရတာအသားတွေပူနေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
1)Aloe vera ရှားစောင်းလက်ပတ်
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး အပြားလိုက်ကလေးတွေ နေလောင်နေတဲ့နေရာကို လိုက်ကပ်ပေးရင်နီရဲတာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ တစ်ချို့က ဇွန်းနဲ့ခြစ်ပြီး အနှစ်ကို လိမ်းပေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်နော် မျက်နှာကော တစ်ကိုယ်လုံးလိမ်းလို့ရပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်မရှိရင်လဲ Cosmetic counter တွေမှာ မိမိနှစ်သက်ရာ brands တွေထဲက Aloe vera soothing gel, Aloe vera after sun တွေလိမ်းပေးရင်လဲရပါတယ်။
သခွားသီးလေးတွေကို အကွင်းလိုက်လေးတွေလှီးပြီး နေလောင်တဲ့နေရာတွေ ကပ်ပေးရင်လဲ နီရဲတာတွေသက်သာစေပါတယ်
3) Oatmeal ကို ရေခဲရေနဲ့ ဖျော်ပြီး နေလောင်တဲ့နေရာတွေ လိမ်းပေးရင်လဲ နေလောင်တာကို သက်သာစေပါတယ်
4) Fat free milk နဲ့ ရေကို 1:4 ရောပြီး လိမ်းပေးရင်လဲ နီရဲတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်နော်။
1. ဖြစ်နိုင်ရင် မနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီနေကို ဒီတစ်လောရှောင်ပေးနိုင်ရင်ရှောင်ပေးသင့်ပါတယ်။
2. မဖြစ်မနေ နေပူထဲထွက်ရမယ်ဆိုရင် နေလောင်ကာ cream SPF 50+++ ဒါမှမဟုတ် သနပ်ခါးတို့ကိုလိမ်းပြီးမှအပြင်ထွက်သင့်ပါတယ်။
3. နေပူထဲထွက်မယ်ဆို ထီး ဦးထုပ် မျက်မှန် အကျီၤရှည် ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ပြီးမှ အပြင်ထွက်သင့်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် နေလောင်တာမှုကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ သိပြီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။